हुर्रे! हामी नयाँ प्लान्टमा सरेका छौं!
प्रिय मित्रहरु, शुभ प्रभात सबैलाई! आज जून 8th, २०१ 2017 हो, हामी यहाँ खडा हुन, इनुओ मोल्ड कं, लि। को उद्घाटन समारोह आयोजित गर्न र कम्पनीको अनावरणको अविस्मरणीय क्षणको साक्षी दिन अत्यन्तै सम्मानित छौं। Enuo Mold पार्टनरहरूको सक्रिय सहभागितालाई धन्यवाद, समर्थनलाई धन्यवाद ... थप पढ्नुहोस्
वाह! समुद्र तट मा अद्भुत छुट्टी!
- एक Dapeng समुद्र तट को छुट्टी प्रिय Enuo मोल्ड साथीहरु: जब मौसम परिवर्तन, यो समय बितेको जानिन्छ। अनजानमा, अगस्त २०१ the क्यालेन्डरबाट बदलिनेछ। गर्मी बिस्तारै गएको छ, र शरद comingतु आउँदैछ। सबै एनुओ मोल्ड पार्टनरहरूको लागि, विगत ... ... थप पढ्नुहोस्
ननकुन्सन तातो स्प्रि Health्ग स्वास्थ्य भ्यालीको यात्रा - दिनको लागि पानी परिरहेको छ र मलाई थाहा छैन वसन्त बितिसकेको छ। एक पटक मौसम ठीक भएपछि, मैले महसुस गरे कि गर्मी लामो समयको लागि आइपुगेको छ। समय सधै हाम्रो अनजानो बाटोमा हुन्छ, २०१ 2019 को क्यालेन्डर जुनमा बदलिएको छ, र ... थप पढ्नुहोस्
आजको दिन हास्यास्पद छ!
- सhan्शान ताल लेक अप्रिलमा यात्रा एक रोमान्टिक मौसम मानिन्छ। बेंसीमा फूलहरू बग्ने ठाउँमा भेला हुनु नै मुटुको अधिकांश व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो मान्नु हो। जे होस्, एक मोल्डरको रूपमा, हामीले प्राय: अस्थायी रूपमा हृदयको कविताहरू प्रोजेक्टको वितरणको लागि राख्नुपर्दछ र ... थप पढ्नुहोस्